1-da May: Maalinka Doorashada.
CODBIXINTA 1-da MAY 2008
1-da May 2008d-a “haddii Eebbe Idmo” waxaa dhici doona doorashada qaybta Kawnsollada Golaha magaalada Birmingham (councilors to Birmingham city council). Haddaba, si aad codkaaga u bixiso waa: in aad haysato MUWAADANA (Muwaadin) BUUXADA (FULL CITIZENSHIP).
Yaa ah Muwaadin buuxa?.
Muwaadin Buuxa waxaa ah:
Ruuxii dagan UK ama qaxooti ku ah.
Da’diisu gaadhay 17 sano (16 jir waa yeelan karaa xaqa diiwaangalinta)
Qaatay Jinsiyadda Britisha-ka.
Qaatay Jinsiyadda dal ka mid ah (Baasaboorka) Midawga Reer Yurub
Wata Jinsiyadda (Baasaboor) dalalka ku jira.(Communwealth-ka)
Markaad noqota MUWAADIN BUUXA, durba waxaad xaq u lee dahay doorashada Kawnsollada Magaalada (councilors to Birmingham city council) inaad ka qayb gasho.
Tusaale: haddad tahay Soomaali sita jinsiyadda (Baasaboorka) Nederland (Dutch) dagan Uk, xaq waxaad uleedahay codbixin iyo ka qayb galid doorashada (council-ka) ee1-da May 2008.
Hase yeeshee, si aad u codayso waa in aad isdiiwaan galiso.
Mobile: 07946627428 – 07939940990 - 07968986231
Maxaan u codaynayaa?
Bulshada Soomaaliyeed, inkastoo ay muddo gaaban ku nooshay Birmingham (UK) haddana dhinacyada nolosha sida: ganacsiga, waxbarshada, iyo dad la dhaqanka waxay ka soo hoyisay, magac wanaagsa iyo muuqasho degdeg ah.
Balse, xuquuqdii mawaadinka oo buuxda ma helin, qaybo nolosha ka mid ahna, waxaa ka jira dib u dhaca, sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah degdeg in caqabadahaa looga gudbo. Caqabadaha waxaa ka mid ah:
Guryo liita oo caafimaadka wax u dhimi kara.
Ubabaka oo dugsiyada aan hore u helin, tarbiyaddoodana waaridka lala fara galiyo.
Dhallinyarda oo goobo ay ku kulmaan aan lahayn suuqyadana (city center-ka) dhooban.
Fursadaha shaqada oo hooseeya lacagta oo yar, sidoo kale fursadaha tababaridda oo yar.
Maandooriye iyo Qaad lagu habsaamay, qoysaskana is-afgarad la’aan ka dhex abuuray
Masaajidda iyo Dugsiyada Qaybidda Qoraanka oo xoojin iyo taageero u baahan.
Dhallinyaro fara badan oo xabsiyada lagu hayo oo daryeel iyo ka warqab mudan.
Intaa waxaa dheer soomaaliya oo dhibo fara badan dhex maraysa in farriinteeda la gaarsiiyo dhagaha Bulshada Caalamka, isla markaana lagu baraarujiyo waxa ka qabad degdeg ah iyo u hiillin dadka la xasuuqay, la barakiciyay ee dacdarraysan.
Caqabadahaa waxaad ku jiiri kartaa xuquuqdaadana ku heli kartaa
Cod bixinta oo aad isu diiwaan galiso 16 April 2008 ka hor.
Codka oo aad bixso 1-da May 2008.
DEGDEG U GAAR GOOBAHA DIIWAAN GALINTA IYO CODBIXINTA
WAAJIBKAAGA GUDO - XAQAAGANA WAYDIISO
Waxaa diyaariyey: Cabdiwali Sh.